iPhone 12 နဲ့ Apple ရဲ့အနာဂတျအစီအစဥျတှအေကုနျလုံးကို ဖှငျ့ခလြိုကျတဲ့ Apple ဝနျထမျးတဦး |
Apple / Apple Watch / iPad / iPhone / MacBook / macOS / News
iPhone 12 နဲ့ Apple ရဲ့အနာဂတျအစီအစဥျတှအေကုနျလုံးကို ဖှငျ့ခလြိုကျတဲ့ Apple ဝနျထမျးတဦး
- September 12, 2020 - Pyae Heinn Kyaw
ဒီနသေ့တငျးကတော့ ထူးခွားပါတယျ .. လှနျခဲ့တဲ့3ရကျလောကျက Reddit မှာ AppleSeeder2020 ဆိုတဲ့ Username နဲ့လူတယောကျဟာ Apple နဲ့ပတျသကျတဲ့ သတငျးတှတေျောတျောမြားမြားကို Leak လုပျခဲ့ပါတယျ … Reddit မှာ အမေးအဖွသေဘောမြိုးနဲ့ တခွားလူတှမေေးတဲ့အရာတှကေိုပွနျဖွပေေးခဲ့တာဖွဈပွီးတော့ သူဟာ Apple က ဝနျထမျးတယောကျဖွဈကွောငျး ပွောပွခဲ့ပါတယျ .. သူဟာ Apple ကဝနျထမျးဖွဈကွောငျးကိုလဲ Reddit Moderator တှကေို သကျသပွေခဲ့တာဖွဈလို့ အဆိုပါလူဟာ အတိုငျးအတာတခုထိယုံနိုငျတယျလို့ပွောလို့ရပါတယျ
ဒီနှဈမှာ iPhone 12 အကွောငျး, iPad အကွောငျး, မကျြမှနျအကွောငျး စသဖွငျ့ Apple နဲ့ဆိုငျနဲ့ သတငျးတှေ ပှထနအေောငျ ထှကျနတောကို အားလုံးပဲသတိထားမိမှာပါ .. AppleSeeder2020 ပွောကွားပုံအရ Apple အနနေဲ့ Private Security Firms တှအေပွငျ ဒီလိုသတငျးတှထေုတျလှငျ့ဖို့ ဌာနတခုပါဖှဲ့စညျးထားပွီး Leaks အမှားတှေ ထိုငျထုတျနတေယျလို့သိရပါတယျ .. အခု Reddit မှာ Leak တှလောဖှတဲ့လူကလဲ တခြိနျက Jon Prosser ရဲ့ AR Glasses အတှကျ Source ပေးခဲ့တာဖွဈပွီးတော့ အခု Jon Prosser နဲ့ ပွဿနာတကျမှ Reddit မှာ သူကိုယျတိုငျလာဖှတဲ့သဘောပါပဲ
ကဲဒီတော့ ရှညျရှညျဝေးဝေးပွောမနတေော့ပဲ သိထားရသမြှ Leaks တှကေို စပွောလိုကျရအောငျ
iPhone 12 နဲ့ပတျသကျတဲ့ Leak တှကေတော့ လာမယျ့ September 15 ရကျနမှေ့ာပွုလုပျမယျ့ Apple Event မှာ iPhone 12 အကုနျလုံးကို မိတျဆကျသှားမယျလို့ Leaker ကပွောပါတယျ .. ဒါပမေယျ့ တကယျရောငျးခတြဲ့ရကျစှဲတှကေတော့ iPhone 12 နဲ့ 12 Max ကို October လလညျလောကျမှာ ရောငျးခမြှာဖွဈပွီး iPhone 12 Pro နဲ့ iPhone 12 Pro Max ကို October လကုနျမှာရောငျးခမြှာဖွဈပါတယျ
Specs တှကေိုပွောရမယျဆိုရငျ iPhone 12 Pro နဲ့ 12 Pro Max မှာ LiDAR Sensor နဲ့ 16MP Main Sensor တို့ကို အသုံးပွုလာမယျလို့ဆိုပါတယျ .. Design ကတော့ အခု Leak တှမှောမွငျတှနေ့ရေတဲ့ Design အတိုငျးပါပဲ .. အစပိုငျးကတော့ 120Hz High Refresh Rate က Battery Life ပွဿနာတှကွေောငျ့ iPhone 12 Pro Max မှာပဲပါမယျလို့ ပွောခဲ့ပမေယျ့ အခု Update သတငျးအရတော့ ဘယျ iPhone Model မှာမှ 120Hz High Refresh Rate ပါဝငျလာမှာမဟုတျဘူးလို့သိရပါတယျ
Leak တှအေတိုငျး Navy Blue or Midnight Blue လို့ချေါမယျ့ နကျပွာရောငျ အရောငျတမြိုးဟာလဲ iPhone 12 Pro နဲ့ 12 Pro Max မှာ ပါဝငျလာမယျလို့သိရပါတယျ .. နောကျပွီးတော့ iPhone 12 Pro နဲ့ 12 Pro Max ရဲ့ base-storage ဟာ 128GB ကနစေမှာဖွဈပါတယျ .. Notch ကလဲ ပိုမိုသေးငယျသှားမယျ့အပွငျ ဘေးဘောငျတှဟောလဲ အရငျ iPhone တှထေကျ ပိုကြဥျးသှားဦးမှာပါ
iPhone 12 Lineup ဟာ စတငျရောငျးခခြိနျမှာ iOS 14.1 Install လုပျထားမှာဖွဈပွီး Reverse Wireless Charging, USB-C, Pencil Support တို့ပါဝငျမှာ မဟုတျဘူးလို့သိရပါတယျ .. iPhone 12 Lineup မှာ အားသှငျးခေါငျးထညျ့ပေးတော့မှာမဟုတျပါဘူး .. စြေးတှကေတော့ အောကျပါအတိုငျးဖွဈမယျလို့သိရပါတယျ
iPhone 12 – $649
iPhone 12 Max – $749
iPhone 12 Pro – $999
iPhone 12 Pro Max – $1,099
နောကျဆကျတှဲအနနေဲ့ သိရတာကတော့ iPhone 12 ရဲ့ Battery Life ဟာ iPhone SE (2020) လောကျသာ ခံမယျလို့သိရပါတယျ .. ဒါ့အပွငျ 2021 မှာ iPhone SE အသဈလာမှာမဟုတျပါဘူး
Apple ရဲ့ Under-Display Camera ဟာ စမျးသပျဆဲအနအေထားမှာရှိနပွေီး နောကျ2နှဈအတှငျးလာဦးမှာမဟုတျသေးပါဘူး .. ဒါ့အပွငျ အပေါကျလုံးဝမပါတဲ့ iPhone တှကေိုလဲစမျးသပျနပွေီး နောကျ2နှဈအတှငျး Port-less iPhone တှကေို မွငျတှရေ့ဖှယျမရှိပါဘူး .. အဲ့ဒီအတှငျး USB-C ကိုလဲပွောငျးသုံးမှာမဟုတျပဲ Lightning Port ကိုပဲဆကျသုံးသှားမယျလို့သိရပါတယျ
iPhone တှအေတှကျ နောကျဆုံးသတငျးထူးကတော့ Foldable iPhone ပါ .. Foldable ဆိုပမေယျ့ မှနျကိုခေါကျလို့ရမှာမဟုတျပဲ Display2ခုကို ဆကျပေးထားမှာလို့သိရပါတယျ .. အဆိုပါ Foldable iPhone တှရေဲ့ Prototype ဟာလဲ Apple မှာစမျးသပျနပွေီဖွဈပွီးတော့ Foldable iPhone တှဟော Multitasking ကောငျးကောငျးလုပျမယျ့လူတှအေတှကျ အသငျ့တျောဆုံး Device ဖွဈလာပါလိမျ့မယျ .. ဒါကတော့ iPhone တှနေဲ့ ပတျသကျပွီး သိထားရတဲ့ Leaks အကုနျပါ
iPad Mini နဲ့ iPad Air တှကေို ဘောငျတှကြေဥျးပွီး ထုတျလုပျသှားမှာဖွဈပမေယျ့ Home Button ကိုလုံးဝဖွုတျပဈလိုကျမှာမဟုတျပါဘူး .. iPad Mini နဲ့ iPad Air ဟာ လကျရှိ iPad Pro ရဲ့ Design Language နဲ့သှားဆငျတူပါလိမျ့မယျ .. အသဈလာမယျ့ iPad Air မှာ 60Hz Refresh Rate ပဲဆကျပါလာမှာဖွဈပွီးတော့ Side-mounted Fingerprint မဟုတျပါဘူး .. Apple အနနေဲ့ Side-mounted Fingerprint ကိုစမျးသပျခဲ့ပမေယျ့ Power Button ကို ပိုကွီးအောငျလုပျရမယျ့အပွငျ iPad ကိုဖှငျ့ရမယျ့အနအေထားမှာ User Experience အဆငျမပွဘေူးလို့ ယူဆလို့ Home Button ကိုပဲဆကျသုံးမယျလို့သိရပါတယျ
iPad Pro တှမှော miniLED Display သုံးမယျလို့နာမညျထှကျနပေမေယျ့ miniLED Display နညျးပညာက အခုထိအဆငျသငျ့မဖွဈသေးဘူးလို့သိရပါတယျ .. iPad Pro အသဈတှမှော 2021 မှာမိတျဆကျမှာဖွဈပွီးတော့ A14X Chips ကိုအသုံးပွုပေးထားမှာပါ
Apple Watch Series6မှာ Digital Crown ကိုဖွုတျသှားမှာမဟုတျပဲ ပိုကောငျးတဲ့ Display ပါဝငျလာပွီး ဘေးဘောငျတှပေိုကြဥျးသှားမယျလို့သိရပါတယျ
ဒါ့အပွငျ Sleep Tracking နဲ့ သှေးတှငျးအောကျဆီဂငျြပမာဏကိုတိုငျးတာနိုငျမယျ့ Feature အသဈလဲပါဝငျလာဦးမှာပါ .. Series6ထှကျပွီးတာနဲ့ Series5ကိုစြေးလြှော့ရောငျးမှာဖွဈပွီး Series3ကိုထုတျလုပျရောငျးခမြှုလုံးဝရပျဆဲပဈမယျလို့သိရပါတယျ
အားလုံးထငျနကွေတဲ့ Apple Watch SE တော့ပါဝငျလာမှာ မဟုတျဘူးလို့သိရပါတယျ
အခုလာမယျ့ September Event မှာ MacBook Pro 14″ ကိုပါထညျ့သှငျးကွငွောသှားမယျလို့ AppleSeeder2020 က ထုတျပွောခဲ့ပါတယျ .. အသဈမိတျဆကျမယျ့ MacBook Pro 14″ ရဲ့ Specs တှကေတော့ M14 Silicon Processor, 8GB DDR4 RAM, 512GB SSD, Thunderbolt4Port ပါဝငျလာမှာဖွဈပါတယျ .. Apple ကိုယျပိုငျ Silicon Chip ဟာ LTE Modem ပါဝငျလာမှာဖွဈလို့ MacBook တှမှော Sim Card ထညျ့ပွီး Internet သုံးလို့ရနိုငျခလြေဲရှိပါတယျ
MacBook Pro 14″ ရဲ့ GPU ဟာ ကိုယျတိုငျ Design ဆှဲထုတျလုပျထားတာဖွဈပွီး AMD Radeon Pro 5500M လောကျထိ Powerful ဖွဈတယျလို့သိရပါတယျ .. ဒီသတငျးသာအမှနျဆို 16″ ဝယျထားတဲ့လူတှေ So Sad ပါ .. စြေးကတော့ MacBook Pro 13″ နဲ့တူတူပဲလို့ပွောပါတယျ
နောကျပွီးတော့ MacBook Pro တှနေဲ့ iMac တှမှော 1080p FaceTime Camera ပါဝငျလာမှာဖွဈပွီး MacBook Pro တှမှောလဲ 120Hz High Refresh Rate ရမယျ့ ProMotion Technology ကိုစမျးသပျနတေယျလို့သိရပါတယျ .. ProMotion က iMac တှမှော ပါမယျဆိုတာတော့ မသခြောပါဘူးတဲ့ .. ဒါပမေယျ့ iMac တှမှော Face ID ထညျ့သှငျးဖို့အတှကျ စမျးသပျနတေယျလို့သိရပါတယျ
Apple Silicon သုံးထားတဲ့ MacBook Pro 16″ နဲ့ MacBook 12″ ကို 2021 မှာမိတျဆကျမှာဖွဈပွီး iMac Pro ကို 2021 WWDC မှာမိတျဆကျမယျလို့ ခနျ့မှနျးရပါတယျ .. ဒါ့အပွငျ Apple Silicon Chips သုံးထားတဲ့ Mac တှမှော အနာဂတျမှာ Windows ပါတငျသုံးနိုငျအောငျလို့ Apple ဖကျက ကွိုးစားနတေယျလို့သိရပါတယျ
macOS Big Sur Official Version ကို September Event ပွီးပွီးခငျြးတနျးတငျလို့ရမှာဖွဈပါတယျ .. Handoff Feature ကိုလဲ လုံးဝအဆငျ့မွှငျ့တငျမှာဖွဈပွီး ARM-based iPhone နဲ့ Mac တှကွေားမှာ အလှနျအသုံးဝငျမှာဖွဈပါတယျ .. ဥပမာ iPhone မှာ App တခုသုံးနရေငျး iPhone ကိုပိတျပွီး MacBook ကိုဖှငျ့လိုကျရငျ MacBook မှာ အဲ့ဒီသုံးခဲ့တဲ့နရောအတိုငျး ပွနျပှငျ့လာမယျ့ပုံစံမြိုးပါ
အနာဂတျမှာ MacBook တှကေို Touch Screen နဲ့ထုတျဖို့စိတျကူးတော့မရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယျ .. ဒါ့အပွငျ Apple Silicon Chips တှဟော Intel ရဲ့ i3, i5, i7 ဆိုပွီး Performance အလိုကျအဆငျ့ခှဲထားသလိုမြိုး Silicon Chips တှမှောလဲ Tier ခှဲထားမယျလို့သိရပါတယျ .. လောလောဆယျ မိတျဆကျမယျ့ MacBook Pro 14″ မှာ M14 Chips ပါလာမှာဖွဈပမေယျ့ MacBook 12″ မှာပါမယျ့ Chips ကတော့ M14 လောကျ Powerful မဖွဈဘူးလို့သိရပါတယျ
နောကျဆုံးသတငျးကတော့ Apple Silicon Team က MacBook တှကေို Gaming ပိုငျးမှာ လုံးဝကွမျးထှကျနအေောငျ ကွိုးစားနတေယျဆိုတဲ့သတငျးပါ .. Performance ကိုကောငျးအောငျပွငျဆငျထားတဲ့အပွငျ Game Developer တှကေိုပါ Silicon Chips မှာ Optimize ဖွဈမယျ့ Game တှရေေးပေးဖို့ မဲဆှယျနပေါတယျ
ဒါကတော့ Mac နဲ့ပတျသတျတဲ့သတငျးအစုံပါ
Apple AR Glasses နဲ့အရငျစပွောပါမယျ .. Apple ဟာ AR Glasses ကို 2021 မှာ မိတျဆကျမှာဖွဈပွီး AR Glasses ဟာ ကြှနျတျောတို့မြှျောလငျ့ထားသလို သိပ်ပံခတျေကလို အစုံသုံးလို့ရမယျ့ မကျြမှနျမြိုးမဟုတျပါဘူး .. iPhone ကနေ Information တှေ Complications တှေ Navigations တှကေို AR Glasses မှာပွနျလညျပွသပေးရုံလောကျပဲဖွဈပွီး အဆိုပါ Information တှကေို မကျြမှနျပျေါမှာမွငျရတာမြိုးမဟုတျပဲ ကိုယျ့ရှမှေ့ာပြံဝဲနတေဲ့ ပုံစံမြိုးပွသမယျ့နညျးပညာကို Apple ကတီထှငျနတောဖွဈပါတယျ
AR Glasses နဲ့အတူ VR နဲ့ AR ပေါငျးထားတဲ့ Headset တမြိုးကိုလဲ မိတျဆကျမယျလို့ပွောပမေယျ့ အဲ့တာကမသခြောသေးပါဘူး .. Apple ရဲ့ကျိုယျပိုငျ Headphone ဖွဈမယျ့ AirPods Studio ကိုလဲ 2o21 မှာမိတျဆကျမယျလို့သိရပါတယျ .. နောကျပွီး AirTags လို့ချေါတဲ့ Tracking Device တမြိုးဟာလဲ 2021 March မှာမိတျဆကျမယျလို့သိရပါတယျ .. ​iPhone ရဲ့ Find My App မှာ AR နညျးပညာထညျ့သှငျးပေးလိုကျမှာဖွဈပွီးတော့ AirTags နဲ့တှဲထားတဲ့ပစ်စညျးတှကေို Find My ကနတေဆငျ့ 3D ပုံစံနဲ့ရှာဖှနေိုငျမှာဖွဈပါတယျ
Project Titan လို့နာမညျပေးထားတဲ့ Apple ရဲ့ Car ထုတျလုပျမယျ့အစီအစဥျဟာ တကယျတော့ Apple Car ထုတျလုပျမှာမဟုတျပါဘူး .. အဆိုပါ Project ဟာ ကားတှအေတှကျ Operating System (OS) သီးသနျ့သာထုတျပေးတာဖွဈပွီး အဆိုပါ OS ကို Third Party Car Maker တှဖွေဈတဲ့ BMW, Audi တို့လို Company တှကေ ဝယျပွီး သူတို့ကားတှမှော ထညျ့သှငျးအသုံးပွုမှာဖွဈပါတယျ .. Apple ရဲ့ CarOS မှာ ကိုယျတိုငျမောငျးနှငျတဲ့ Self-driving စနဈပါဝငျလာမယျလို့သိရပါတယျ
AirPower ဟာလဲ လာမယျ့ September Event မှာမိတျဆကျနိုငျတယျလို့သိရပါတယျ .. ဒါ့အပွငျ Apple Silicon Chip တှကေို Apple TV မှာထညျ့သှငျးစမျးသပျနပွေီးတော့ Apple TV for Gaming ဆိုပွီး Product အသဈတမြိုးထုတျလုပျလာနိုငျခရြှေိပါတယျ
နောကျဆုံးသတငျးတှကေတော့ ဒီနှဈအတှငျးမှာ AirPods Pro နဲ့ HomePod အသဈထှကျလာနိုငျခမြေရှိဘူးဆိုတာပါပဲ .. ဒီဟာတှကေို ခွုံငုံသုံးသပျရငျ လာမယျ့ 15 ရကျနမှေ့ာကငျြးပမယျ့ Event မှာ အောကျပါ Device တှမေိတျဆကျလာနိုငျပါတယျ
iPhone 12, 12 Max, 12 Pro, 12 Pro Max
ဒီလောကျဆိုတျောတျောလေးစုံသှားပွီလို့ ထငျပါတယျ .. Thanks for reading guys xD
ဒီနေ့သတင်းကတော့ ထူးခြားပါတယ် .. လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်က Reddit မှာ AppleSeeder2020 ဆိုတဲ့ Username နဲ့လူတယောက်ဟာ Apple နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေတော်တော်များများကို Leak လုပ်ခဲ့ပါတယ် … Reddit မှာ အမေးအဖြေသဘောမျိုးနဲ့ တခြားလူတွေမေးတဲ့အရာတွေကိုပြန်ဖြေပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ သူဟာ Apple က ဝန်ထမ်းတယောက်ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ် .. သူဟာ Apple ကဝန်ထမ်းဖြစ်ကြောင်းကိုလဲ Reddit Moderator တွေကို သက်သေပြခဲ့တာဖြစ်လို့ အဆိုပါလူဟာ အတိုင်းအတာတခုထိယုံနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်
ဒီနှစ်မှာ iPhone 12 အကြောင်း, iPad အကြောင်း, မျက်မှန်အကြောင်း စသဖြင့် Apple နဲ့ဆိုင်နဲ့ သတင်းတွေ ပွထနေအောင် ထွက်နေတာကို အားလုံးပဲသတိထားမိမှာပါ .. AppleSeeder2020 ပြောကြားပုံအရ Apple အနေနဲ့ Private Security Firms တွေအပြင် ဒီလိုသတင်းတွေထုတ်လွှင့်ဖို့ ဌာနတခုပါဖွဲ့စည်းထားပြီး Leaks အမှားတွေ ထိုင်ထုတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ် .. အခု Reddit မှာ Leak တွေလာဖွတဲ့လူကလဲ တချိန်က Jon Prosser ရဲ့ AR Glasses အတွက် Source ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ အခု Jon Prosser နဲ့ ပြဿနာတက်မှ Reddit မှာ သူကိုယ်တိုင်လာဖွတဲ့သဘောပါပဲ
ကဲဒီတော့ ရှည်ရှည်ဝေးဝေးပြောမနေတော့ပဲ သိထားရသမျှ Leaks တွေကို စပြောလိုက်ရအောင်
iPhone 12 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Leak တွေကတော့ လာမယ့် September 15 ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မယ့် Apple Event မှာ iPhone 12 အကုန်လုံးကို မိတ်ဆက်သွားမယ်လို့ Leaker ကပြောပါတယ် .. ဒါပေမယ့် တကယ်ရောင်းချတဲ့ရက်စွဲတွေကတော့ iPhone 12 နဲ့ 12 Max ကို October လလည်လောက်မှာ ရောင်းချမှာဖြစ်ပြီး iPhone 12 Pro နဲ့ iPhone 12 Pro Max ကို October လကုန်မှာရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်
Specs တွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင် iPhone 12 Pro နဲ့ 12 Pro Max မှာ LiDAR Sensor နဲ့ 16MP Main Sensor တို့ကို အသုံးပြုလာမယ်လို့ဆိုပါတယ် .. Design ကတော့ အခု Leak တွေမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ Design အတိုင်းပါပဲ .. အစပိုင်းကတော့ 120Hz High Refresh Rate က Battery Life ပြဿနာတွေကြောင့် iPhone 12 Pro Max မှာပဲပါမယ်လို့ ပြောခဲ့ပေမယ့် အခု Update သတင်းအရတော့ ဘယ် iPhone Model မှာမှ 120Hz High Refresh Rate ပါဝင်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်
Leak တွေအတိုင်း Navy Blue or Midnight Blue လို့ခေါ်မယ့် နက်ပြာရောင် အရောင်တမျိုးဟာလဲ iPhone 12 Pro နဲ့ 12 Pro Max မှာ ပါဝင်လာမယ်လို့သိရပါတယ် .. နောက်ပြီးတော့ iPhone 12 Pro နဲ့ 12 Pro Max ရဲ့ base-storage ဟာ 128GB ကနေစမှာဖြစ်ပါတယ် .. Notch ကလဲ ပိုမိုသေးငယ်သွားမယ့်အပြင် ဘေးဘောင်တွေဟာလဲ အရင် iPhone တွေထက် ပိုကျဉ်းသွားဦးမှာပါ
iPhone 12 Lineup ဟာ စတင်ရောင်းချချိန်မှာ iOS 14.1 Install လုပ်ထားမှာဖြစ်ပြီး Reverse Wireless Charging, USB-C, Pencil Support တို့ပါဝင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ် .. iPhone 12 Lineup မှာ အားသွင်းခေါင်းထည့်ပေးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး .. ဈေးတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်မယ်လို့သိရပါတယ်
နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ သိရတာကတော့ iPhone 12 ရဲ့ Battery Life ဟာ iPhone SE (2020) လောက်သာ ခံမယ်လို့သိရပါတယ် .. ဒါ့အပြင် 2021 မှာ iPhone SE အသစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး
Apple ရဲ့ Under-Display Camera ဟာ စမ်းသပ်ဆဲအနေအထားမှာရှိနေပြီး နောက်2နှစ်အတွင်းလာဦးမှာမဟုတ်သေးပါဘူး .. ဒါ့အပြင် အပေါက်လုံးဝမပါတဲ့ iPhone တွေကိုလဲစမ်းသပ်နေပြီး နောက်2နှစ်အတွင်း Port-less iPhone တွေကို မြင်တွေ့ရဖွယ်မရှိပါဘူး .. အဲ့ဒီအတွင်း USB-C ကိုလဲပြောင်းသုံးမှာမဟုတ်ပဲ Lightning Port ကိုပဲဆက်သုံးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
iPhone တွေအတွက် နောက်ဆုံးသတင်းထူးကတော့ Foldable iPhone ပါ .. Foldable ဆိုပေမယ့် မှန်ကိုခေါက်လို့ရမှာမဟုတ်ပဲ Display2ခုကို ဆက်ပေးထားမှာလို့သိရပါတယ် .. အဆိုပါ Foldable iPhone တွေရဲ့ Prototype ဟာလဲ Apple မှာစမ်းသပ်နေပြီဖြစ်ပြီးတော့ Foldable iPhone တွေဟာ Multitasking ကောင်းကောင်းလုပ်မယ့်လူတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံး Device ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် .. ဒါကတော့ iPhone တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိထားရတဲ့ Leaks အကုန်ပါ
iPad Mini နဲ့ iPad Air တွေကို ဘောင်တွေကျဉ်းပြီး ထုတ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပေမယ့် Home Button ကိုလုံးဝဖြုတ်ပစ်လိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး .. iPad Mini နဲ့ iPad Air ဟာ လက်ရှိ iPad Pro ရဲ့ Design Language နဲ့သွားဆင်တူပါလိမ့်မယ် .. အသစ်လာမယ့် iPad Air မှာ 60Hz Refresh Rate ပဲဆက်ပါလာမှာဖြစ်ပြီးတော့ Side-mounted Fingerprint မဟုတ်ပါဘူး .. Apple အနေနဲ့ Side-mounted Fingerprint ကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပေမယ့် Power Button ကို ပိုကြီးအောင်လုပ်ရမယ့်အပြင် iPad ကိုဖွင့်ရမယ့်အနေအထားမှာ User Experience အဆင်မပြေဘူးလို့ ယူဆလို့ Home Button ကိုပဲဆက်သုံးမယ်လို့သိရပါတယ်
iPad Pro တွေမှာ miniLED Display သုံးမယ်လို့နာမည်ထွက်နေပေမယ့် miniLED Display နည်းပညာက အခုထိအဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးလို့သိရပါတယ် .. iPad Pro အသစ်တွေမှာ 2021 မှာမိတ်ဆက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ A14X Chips ကိုအသုံးပြုပေးထားမှာပါ
Apple Watch Series6မှာ Digital Crown ကိုဖြုတ်သွားမှာမဟုတ်ပဲ ပိုကောင်းတဲ့ Display ပါဝင်လာပြီး ဘေးဘောင်တွေပိုကျဉ်းသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
ဒါ့အပြင် Sleep Tracking နဲ့ သွေးတွင်းအောက်ဆီဂျင်ပမာဏကိုတိုင်းတာနိုင်မယ့် Feature အသစ်လဲပါဝင်လာဦးမှာပါ .. Series6ထွက်ပြီးတာနဲ့ Series5ကိုဈေးလျှော့ရောင်းမှာဖြစ်ပြီး Series3ကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုလုံးဝရပ်ဆဲပစ်မယ်လို့သိရပါတယ်
အားလုံးထင်နေကြတဲ့ Apple Watch SE တော့ပါဝင်လာမှာ မဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်
အခုလာမယ့် September Event မှာ MacBook Pro 14″ ကိုပါထည့်သွင်းကြေငြာသွားမယ်လို့ AppleSeeder2020 က ထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ် .. အသစ်မိတ်ဆက်မယ့် MacBook Pro 14″ ရဲ့ Specs တွေကတော့ M14 Silicon Processor, 8GB DDR4 RAM, 512GB SSD, Thunderbolt4Port ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ် .. Apple ကိုယ်ပိုင် Silicon Chip ဟာ LTE Modem ပါဝင်လာမှာဖြစ်လို့ MacBook တွေမှာ Sim Card ထည့်ပြီး Internet သုံးလို့ရနိုင်ချေလဲရှိပါတယ်
MacBook Pro 14″ ရဲ့ GPU ဟာ ကိုယ်တိုင် Design ဆွဲထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး AMD Radeon Pro 5500M လောက်ထိ Powerful ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် .. ဒီသတင်းသာအမှန်ဆို 16″ ဝယ်ထားတဲ့လူတွေ So Sad ပါ .. ဈေးကတော့ MacBook Pro 13″ နဲ့တူတူပဲလို့ပြောပါတယ်
နောက်ပြီးတော့ MacBook Pro တွေနဲ့ iMac တွေမှာ 1080p FaceTime Camera ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီး MacBook Pro တွေမှာလဲ 120Hz High Refresh Rate ရမယ့် ProMotion Technology ကိုစမ်းသပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ် .. ProMotion က iMac တွေမှာ ပါမယ်ဆိုတာတော့ မသေချာပါဘူးတဲ့ .. ဒါပေမယ့် iMac တွေမှာ Face ID ထည့်သွင်းဖို့အတွက် စမ်းသပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်
Apple Silicon သုံးထားတဲ့ MacBook Pro 16″ နဲ့ MacBook 12″ ကို 2021 မှာမိတ်ဆက်မှာဖြစ်ပြီး iMac Pro ကို 2021 WWDC မှာမိတ်ဆက်မယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ် .. ဒါ့အပြင် Apple Silicon Chips သုံးထားတဲ့ Mac တွေမှာ အနာဂတ်မှာ Windows ပါတင်သုံးနိုင်အောင်လို့ Apple ဖက်က ကြိုးစားနေတယ်လို့သိရပါတယ်
macOS Big Sur Official Version ကို September Event ပြီးပြီးချင်းတန်းတင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် .. Handoff Feature ကိုလဲ လုံးဝအဆင့်မြှင့်တင်မှာဖြစ်ပြီး ARM-based iPhone နဲ့ Mac တွေကြားမှာ အလွန်အသုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် .. ဥပမာ iPhone မှာ App တခုသုံးနေရင်း iPhone ကိုပိတ်ပြီး MacBook ကိုဖွင့်လိုက်ရင် MacBook မှာ အဲ့ဒီသုံးခဲ့တဲ့နေရာအတိုင်း ပြန်ပွင့်လာမယ့်ပုံစံမျိုးပါ
အနာဂတ်မှာ MacBook တွေကို Touch Screen နဲ့ထုတ်ဖို့စိတ်ကူးတော့မရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ် .. ဒါ့အပြင် Apple Silicon Chips တွေဟာ Intel ရဲ့ i3, i5, i7 ဆိုပြီး Performance အလိုက်အဆင့်ခွဲထားသလိုမျိုး Silicon Chips တွေမှာလဲ Tier ခွဲထားမယ်လို့သိရပါတယ် .. လောလောဆယ် မိတ်ဆက်မယ့် MacBook Pro 14″ မှာ M14 Chips ပါလာမှာဖြစ်ပေမယ့် MacBook 12″ မှာပါမယ့် Chips ကတော့ M14 လောက် Powerful မဖြစ်ဘူးလို့သိရပါတယ်
နောက်ဆုံးသတင်းကတော့ Apple Silicon Team က MacBook တွေကို Gaming ပိုင်းမှာ လုံးဝကြမ်းထွက်နေအောင် ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါ .. Performance ကိုကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အပြင် Game Developer တွေကိုပါ Silicon Chips မှာ Optimize ဖြစ်မယ့် Game တွေရေးပေးဖို့ မဲဆွယ်နေပါတယ်
ဒါကတော့ Mac နဲ့ပတ်သတ်တဲ့သတင်းအစုံပါ
Apple AR Glasses နဲ့အရင်စပြောပါမယ် .. Apple ဟာ AR Glasses ကို 2021 မှာ မိတ်ဆက်မှာဖြစ်ပြီး AR Glasses ဟာ ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားသလို သိပ္ပံခေတ်ကလို အစုံသုံးလို့ရမယ့် မျက်မှန်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး .. iPhone ကနေ Information တွေ Complications တွေ Navigations တွေကို AR Glasses မှာပြန်လည်ပြသပေးရုံလောက်ပဲဖြစ်ပြီး အဆိုပါ Information တွေကို မျက်မှန်ပေါ်မှာမြင်ရတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ကိုယ့်ရှေ့မှာပျံဝဲနေတဲ့ ပုံစံမျိုးပြသမယ့်နည်းပညာကို Apple ကတီထွင်နေတာဖြစ်ပါတယ်
AR Glasses နဲ့အတူ VR နဲ့ AR ပေါင်းထားတဲ့ Headset တမျိုးကိုလဲ မိတ်ဆက်မယ်လို့ပြောပေမယ့် အဲ့တာကမသေချာသေးပါဘူး .. Apple ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Headphone ဖြစ်မယ့် AirPods Studio ကိုလဲ 2o21 မှာမိတ်ဆက်မယ်လို့သိရပါတယ် .. နောက်ပြီး AirTags လို့ခေါ်တဲ့ Tracking Device တမျိုးဟာလဲ 2021 March မှာမိတ်ဆက်မယ်လို့သိရပါတယ် .. ​iPhone ရဲ့ Find My App မှာ AR နည်းပညာထည့်သွင်းပေးလိုက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ AirTags နဲ့တွဲထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကို Find My ကနေတဆင့် 3D ပုံစံနဲ့ရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
Project Titan လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ Apple ရဲ့ Car ထုတ်လုပ်မယ့်အစီအစဉ်ဟာ တကယ်တော့ Apple Car ထုတ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး .. အဆိုပါ Project ဟာ ကားတွေအတွက် Operating System (OS) သီးသန့်သာထုတ်ပေးတာဖြစ်ပြီး အဆိုပါ OS ကို Third Party Car Maker တွေဖြစ်တဲ့ BMW, Audi တို့လို Company တွေက ဝယ်ပြီး သူတို့ကားတွေမှာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ် .. Apple ရဲ့ CarOS မှာ ကိုယ်တိုင်မောင်းနှင်တဲ့ Self-driving စနစ်ပါဝင်လာမယ်လို့သိရပါတယ်
AirPower ဟာလဲ လာမယ့် September Event မှာမိတ်ဆက်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ် .. ဒါ့အပြင် Apple Silicon Chip တွေကို Apple TV မှာထည့်သွင်းစမ်းသပ်နေပြီးတော့ Apple TV for Gaming ဆိုပြီး Product အသစ်တမျိုးထုတ်လုပ်လာနိုင်ချေရှိပါတယ်
နောက်ဆုံးသတင်းတွေကတော့ ဒီနှစ်အတွင်းမှာ AirPods Pro နဲ့ HomePod အသစ်ထွက်လာနိုင်ချေမရှိဘူးဆိုတာပါပဲ .. ဒီဟာတွေကို ခြုံငုံသုံးသပ်ရင် လာမယ့် 15 ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့် Event မှာ အောက်ပါ Device တွေမိတ်ဆက်လာနိုင်ပါတယ်
ဒီလောက်ဆိုတော်တော်လေးစုံသွားပြီလို့ ထင်ပါတယ် .. Thanks for reading guys xD
macOS မှာ မွနျမာ Font နဲ့ မွနျမာ Keyboard ထညျ့သှငျးနညျး (Both ZawGyi and Unicode)
iOS 14 မတငျခငျ သိထားရမညျ့အခကျြမြား
iOS 14 မှာပါဝငျလာတဲ့ သငျ့ကို ဘယျ Application တှကေ တိတျတဆိတျထောကျလှမျးနလေဲဆိုတာကို သိရှိနိုငျမညျ့ Privacy Features မြား
AirPods Pro Firmware Update မှာအသဈပါဝငျလာတဲ့ Spatial Audio Feature
Copyright © 2020	Pyae Heinn Kyaw's Blog | powered by XBlog Plus WordPress Theme